John Terry oo kansalay xafladii sagootinta ee loogu qaban lahaa Stamford Bridge…(Waa sidee xaalku?) – Gool FM
John Terry oo kansalay xafladii sagootinta ee loogu qaban lahaa Stamford Bridge…(Waa sidee xaalku?)
(London) 16 Maajo 2016. Waxaa usbuucyada soo soo socda soo afjarmi doona heshiiska uu John Terry ugu joogo Chelsea waxaana aad loo hadal hayaa inuu isaga tagi doono kooxda uu waqtiga dheer ku soo qaatay.
Laakiin John Terry ayaa bixiyay qishkii ugu waynaa ee ah inuu sii joogi doono Gegida Stamford Bridge kaddib markii uu kansalay xafladii sagootinta ee loogu qaban lahaa garoonka Blues.
Waxaa lagu waday in Isniinta xaflad sagootin ah loogu qabto Terry Stamford Bridge laakiin waa uu kansalay taas oo caddeyn u noqon karta inuu sii joogayo Blues.
Chelsea ayaa u soo bandhigtay kabtankeeda qandaraas hal sano ah laakiin wax heshiis ah oo la isla meel dhigay ma jiraa ilaa iminka.
Dalab qaali ah ayuu kabtankii hore ee England kala kulmayaa dalka Shiinaha laakiin sida muuqata wuxuu doonayaa inuu sii joogo London isla markaana ka fikiro heshiiskii loo bandhigay.
Mar uu la hadlay taageerayaasha ciyaartii ugu dambeysay ee Chelsea ayuu Terry yiri: “Isku wax ayaan wada dooneynaa dhammaan, Waqti dheer ayaan oranayay waxaan doonayaa inaan waayaheyga ciyaareed ku dhameysto halkan, waxaan la hadli doonaa kooxda maalmaha yar ee soo socda, waxaan doonayaa inaan joogo, kooxdu way ogtahay midaa, taageerayaashu way ogyihiin midaa, waxaan doonayaa inaan joogo.
“Chelsea waa nolosheyda, sida ay adinkuba noloshiina u tahay, waqtiyadii ugu fiicnaa nolosheyda waxay ahayd garoonkan, qeyb wayn ayaadna ka ahaydeen midaaa.
SAWIRRO: Liverpool oo u duushay Basel ka hor final-ka Europe League ee arbacada